खेल सकिएपछि हात मिलाउने कि झगडामा उत्रने ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
खेल सकिएपछि हात मिलाउने कि झगडामा उत्रने ?
पुस २२, २०७६ मंगलबार ७:२४:१२ | उज्यालो सहकर्मी
उनी आफैले झगडा साम्य पार्न निकै कठिन थियो । त्यसपछि बेञ्चमा रहेका मनाङका रञ्जन विष्ट र मच्छिन्द्रका विजय धिमाल पनि मैदान छिरेर झगडामा संलग्न भएका थिए। रेफ्रीले झगडामा संलग्न मनाङका अशाेकलाई रातो कार्ड दिए। त्यसैले झगडालाई साम्य पार्न एक दर्जन पुलिस मैदानमा पुगेका थिए । यतिमात्र होइन क्लबका पदाधिकारी र एन्फा अफिसियल पनि झगडालाई साम्य पार्न लागेका थिए ।
साेमबार भएकाे खेलमा एनआरटी र जावलाखेल गाेलरहित बराबरी राेकिएका थियाे । त्यस्तै साेमबार नै भएकाे दाेस्राे खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र मच्छिन्द्र युवा क्लबले बराबरी खेलेका छन् ।